Sunita Dulal - Sunita Dulal - प्रेम गर्ने फुसर्द नै छैन - सुनिता दुलाल
Prabin Kumar: Thanks for sharing Sunita ji. Sunita ji lai ‘मायालाई के दिऊँ म’ album ko lagi mero tarfa bhata safalta...
Umesh Puri: very nice and beautiful Nepali folk song, people will like it too much.
Prabin Kumar: Thanks for sharing Sunita ji. All the best and success for your ” माया लाइ के दिउ म ” album.
hari karki: I am also happy to hear about your new car. I would like to wish you more success in near future. Sunita...
hari karki: Nice 6a hajur ko picture and new car sister.
एल्बहरुमै व्यस्त छु । ‘शिरमा फूल’ भन्ने मेरो पहिलो लोक आधुनिक एल्बम भर्खरै बजारमा आएको छ । एकातिर त्यसको प्रमोशनमा व्यस्त छु भने ‘मेरो हजुर’ भन्ने तीजको गीतहरूको एल्बमको पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ । म्युजिक भिडियो बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
गीत गाएरै सुनिता दुलालले धेरै पैसा कमाइन् भन्छन् नि? मैले मात्र होइन राम्रो गीत गाउने धेरैले पैसा कमाएका छन् । राम्रो काम गरेपछि त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो नै हुन्छ । तर, त्यस्तो धेरै पैसा कमाएको पनि होइन, जे होस् आफूलाई पुगेको छ । विभिन्न देशमा गएर गाउने मौका पाइन्छ । विदेशका स्टेज कार्यक्रममा र महोत्सवहरुमा राम्रो पैसा कमाइन्छ ।
एल्बमबाट चाहिँ छैन?
एल्बमको बिक्री जिरो जस्तै छ । विदेशमा अलिअलि भिसिडी पुश सेल हुने हो, बिक्री त खासै छैन । हामीले कमाउने भनेको त कार्यक्रमबाट मात्र हो । किन एल्बम बिक्री जिरो भएको?
मुख्य कारण त पाइरेसी नै हो । अहिले डिजिटल टेक्नोलोजीले पनि एल्बम बिक्री घटाएको छ । झोले कम्पनीका कारण पनि समस्या छ ।
अहिलेसम्म कति गीत गाउनुभयो?
बजारमा आउन लागेको तीजको एल्बमसहित मेरो १३ वटा एल्बम भएको छ । फिल्महरूको लागि पनि गाएको छु ।
साउनभरि महिलाहरू शिव भगवानको नाममा व्रत बस्छन् नि तपाई नि बस्नुभएको छ?
व्रत त म पनि बस्ने गर्छु । तर त्यस्तो केही नखाई भने होइन । मासुहरु भने खान्न । परम्परा अनुसार चलेको हो । आफ्नै शिव रोज्ने बेला भएन?
अहिले नै सोच छैन । अझै १/२ वर्ष करिअरमा लागेपछि मात्र बिहे गर्ने सोच छ ।
एक–दुई वर्ष पहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, होइन? हुन त हो । तर अहिले बिहे गर्ने सोच नै आएको छैन ।
प्रेममा त हुनुहुन्छ कि?
प्रेममा पनि परेको छैन । प्रेममा परेर पनि के गर्ने? टाइम दिनुपर्‍यो । बिहानदेखि बेलुकासम्म काममै व्यस्त होइन्छ । बिहान सात बजे घरबाट निस्किएर बेलुका आठ बजे पुगिन्छ । कामले गर्दा प्रेम गर्ने फुर्सद पनि छैन । आफ्नो जीवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहना छ?
मुख्य कुरा त मेरो प्रोफेसनलाई माया गर्नुपर्‍यो । बाहिर राम्रो भन्दा पनि भित्री मन राम्रो भएको हुनुपर्छ । सायद छिट्टै जुर्ला ।
बिहे नगरे पनि ब्याईफ्रेन्ड चाहिँ होस् जस्तो लाग्दैन?
होस् जस्तो नि लाग्छ, नहोस् जस्तो नि लाग्छ । जीवनमा एउटा जीवनसाथी त अवश्य चाहिन्छ । एक्लै बाँच्न सकिन्न ।
तर ब्याईफ्रेन्ड हुँदा पनि फ्रिडम हुँदैन कि भन्ने हो । एक्लै हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाइन्छ । ब्याइफ्रेन्ड भएपछि उसको हस्तक्षेप हुनसक्छ । तपाईँलाई मन पर्ने गायिका को?
मलाई मन पर्ने भनेको स्वर्गीय अरुणा लामा हो । अहिलेका पनि सबै जसो मन पर्छ । फुर्सदको समयमा कसरी बिताउनुहुन्छ?
मलाई फुर्सद नै कहिल्यै हुँदैन । आफ्नै म्युजिक कम्पनी पनि छ । त्यसकारण म कहिल्यै फुर्सद निकाल्न सक्दिनँ । कहिले काहीँ मिलाउँदा भने घुम्न जान र सपिङ जान मन लाग्छ ।
राजनीति चासो लाग्दैन?
चासो लाग्छ। पहिला खासै मतलब हुँदैन थियो । संविधानसभाको कुराहरू आएपछि भने मलाई निकै चासो लाग्न थालेको छ । नेताहरू भनेका हाम्रा अभिभावक हुन् । तर, त्यो भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको जस्तो छ । विदेशतिर घुम्दा खेरी हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै विकास होस् भन्ने लाग्छ । Source Link: http://tinyurl.com/sunita-dulal-drishti
dristi, nepali songs, sunita dulal, teej song	27 July 2012 2,072 views